ကလေး၏ ပထ မဆုံး လှုပ်ရှားမှု-MamyPoko Myanmar
ကလေး ငယ်၏ လှုပ်ရှားမှု ဆိုတာ ဘယ်လို ခံစားမှု မျိုးလဲ?
အမြဲတမ်း လှုပ်နေ တာလား? ဒီလှုပ် ရှားမှု၌ ကလေး ဆီမှ အမှာ စကား များစွာ ပါဝင် နေပါသည်။
မိခင်က အဲ့ဒီ အဓိ ပ္ပာယ်ကို နားလည် သဘောပေါက် လက်ခံ ပေးလိုက်ပါ!
အယ်လ်ထ ရာဆောင်း ရိုက်ခြင်းဖြင့် ကလေး ငယ်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို မျက်လုံးဖြင့် သေချာစွာ စစ်ဆေး နိုင်သော ကိစ္စ ကလည်း ပျော်စ ရာတခု ဖြစ်ပေမဲ့လည်း「ဒီနေရာ၌ ကလေးလေး ရှိနေပါလား 」 ဆိုသည့် ကိုယ်ကိုတိုင် ခံစားလို့ ရနိုင်သော ကလေး လှုပ်ခြင်း..
ဒီလို ပျော်ရွှင် မှုမျိုးကို အလျှင် အမြန် ခံစား ကြည့်ချင် ကြမှာ ပါပဲ။ ဒါဆို ကလေး လှုပ်ခြင်း ဆိုတာ ဘယ်လို အချိန်၌ ဘယ်လို ခံစား မှုမျိုး လဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့် လိုက်ကြ ရအောင်！
ကလေး၏ လှုပ်ရှားမှု ဆိုတာ ဘယ်လို မျိုးလဲ?
ကိုယ်ဝန် ၅ လလောက် ရောက်လာလျှင် ကလေး ငယ်၏ အရိုးနှင့် ကြွက်သားများ ကြီးထွား လာပြီး ရေမွှာ အိတ်ထဲ ၌လည်း ခြေလက်များ ဆန့်တန်း ခြင်းဖြင့် သက်ဝင် လှုပ်ရှားစွာ လှည့်ပတ်
လှုပ်ရှား နိုင်လာသည်။ ထိုခြေ လက်များက မိခင်၏ သားအိမ် နံရံကို ထိတွေ့သည့် အချိန် ခံစား ရသော ခံစား မှုက ကလေး လှုပ်ရှားခြင်း ဖြစ်၏။ ထို့အပြင် ဤ လှုပ်ရှား မှုသည် ကလေး
ငယ်က ဝမ်းဗိုက် ထဲတွင် ရှိနေ ပါသည် ဆိုတာကို ခံစား စေချင်တာ တခုထဲ မဟုတ်ပဲ ကလေး ကိုယ်တိုင်က မိခင်ကို အသိ ပေးသော အရေး ကြီးသည့် ဆက်သွယ် မှုလည်း ဖြစ်၏။
ကလေး လှုပ်ရှား မှုကို ပထမဆုံး ခံစား မိသည့် အချိန်
သာမန် အားဖြင့် ပထမ အကြိမ် ကလေး လှုပ်ရှား မှုကို ခံစား ရခြင်း
သည် ကိုယ်ဝန် ၁၈ပတ် ကနေ ၂၀ပတ် လို့ပြော ကြပါသည်။ ဒါပေ မဲ့ ကလေး လှုပ်ရှား မှုကို ခံစား ရသည့် ကာလသည် တဦးနှင့် တဦး ကွာခြားချက် ကြီးမား ပါသည်။ မိခင်၏ အရေ ပြားအောက် အဆီ အထူနှင့် ရေမွှာ ရေပ မာဏ၊ အချင်း အနေ အထား အစ ရှိသည် တို့ပေါ် မူတည်ပြီး ခံစားပုံ ပြောင်းလဲ လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဒီအချိန် ကာလကို ကျော်၍ ကလေး လှုပ်ရှားမှု ကိုမ ခံစား ရလျှင်လည်း စိတ်ပူ စရာ မလိုပါ။ အယ်လ်ထ ရာဆောင်းဖြင့် ကလေး၏ ကျန်းမာစွာ ကြီးပြင်း နေသည့် ပုံအား စစ်ကြည့် နိုင်လျှင် ပြဿနာ မရှိ သောကြောင့် စိတ်ချပါ။
အမှန် တကယ် ကတော့ ကလေး ငယ်သည် မိခင်က လှုပ်ရှား မှုကို
မခံစား ရခင် ကတည်းက လှုပ်နေ ပါပြီ။
ကိုယ်ဝန် ၇ပတ် မြောက်လောက် ဖြစ်လာလျှင် အာရုံကြော ဖွံ့ဖြိုး
လာပြီး ၁၂ပတ် လောက်မှ နေ၍ လက်ချောင်း လှုပ်ရှားမှု စတင်ပြီး ၂၀ပတ် မြောက်ကို ကျော်လွန် လာလျှင် ရေမွှာ အိတ်ထဲ၌ လွတ် လပ် စွာဖြင့် လှုပ်ရှား နိုင်လာသည်！ဒီအ ချိန်သည် မိခင်က ကလေး၏ လှုပ်ရှား မှုကို ခံစား နိုင်ခြင်း အစ ဖြစ်သည်။
လှုပ်ရှား ခြင်းကို ခံစား ရပုံ ပြောင်းလဲခြင်း
ကလေး ငယ်၏ လှုပ်ရှား မှုကို ပထမ အကြိမ် ခံစား ရချိန်က တဦးနှင့် တဦး မတူညီ သလို၊ ခံစား ရပုံလည်း မတူပါ။
ပထမဆုံး အကြိမ်၌ ဗိုက်ထဲတွင် ဓာတ်စီးကြောင်း ဖြတ်ပြေး သလို
လေတိုက် သလိုမျိုး အရာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဘာမှ မရှိသည့် ခံစား ချက်မျိုး
ပြောင်းသွားပြီး မကြာမီ တွင်「အ..ကန်နေတာ」လို့ နားလည် လောက်သည့် ခံစားမှု ဖြစ်လာ သည်။ တခါ တလေ ကလေးက ကြို့ထိုး ခြင်းကို ခံစား ရခြင်း များလည်း ရှိသည်။ ထို့ထက် ပိုပြင်းထန် လာလျှင် ဗိုက်ကို မျက်လုံးဖြင့် ကြည့်ရုံဖြင့် ကလေး လှုပ်နေ တာကို သိခြင်းလည်းရှိသည်။
ထိုလှုပ်ရှား မှုမှ တဆင့် ကလေးနှင့် ထိတွေ့ ကြရအောင်။
ကလေး လှုပ်ခြင်းသည် မိခင်နှင့် ဗိုက်ထဲမှ ကလေး၏ ပထမဆုံး သောဆက် သွယ်မှု！
မိခင်သည် ကလေး လှုပ်ခြင်း မှတဆင့် ကလေး ကျန်းမာလား
မကျန်း မာဘူးလား ဆိုပြီး စစ်ဆေးခြင်း၊ စကား ပြောခြင်း များလုပ် နိုင်သည်။ ကလေး ကလည်း မိခင်နှင့် စကား ပြောရခြင်း၊ ဆော့က စား ရခြင်းကို နှစ်သက် ပါသည်။
ဗိုက်ထဲ ၌ရှိသော ကလေးနှင့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံ နိုင်သည့် တန်ဖိုး
ရှိသော အချိန် များကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်ကျော် ကြည့်ရအောင်။
ကလေး လှုပ်ခြင်း အား စစ်ဆေး ကြည့်ခြင်း
ကလေး လှုပ်ခြင်းသည် ကလေး ငယ်က ကျန်းမာ စွာဖြင့် ကြီးထွား
နေလား ဆိုတာကို စစ်ဆေး နိုင်သည့် တခုသော နည်းလမ်း ဖြစ်၏။ ကလေး လှုပ်ခြင်းကို တောက်လျှောက် သိရှိ ခံစား နေခဲ့ ရပြီး တနေ့ တာလောက် မလှုပ် ဘူးလို့ ခံစား ရသည့် အချိန်၌ စိတ်ချ ရအောင် ဆေးရုံ သွားပြ ကြည့်တာ ပိုကောင်း ပါသည်။
တဖန် ကိုယ်ဝန် ၃၂ပတ် ~၃၅ပတ် လောက်ရောက် လာလျှင် ကလေး အိပ်နေ ချိန်နှင့် နိုးနေ ချိန်၌ စီးဝါး ကျစွာလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်လာ သောကြောင့် နေ့တိုင်း ၁၀ကြိမ် လှုပ်တဲ့ထိ ကြာချိန် ကိုမှတ် ထား ပြီး လှုပ်ရှား မှုကို ရေတွက် ကြည့်မယ် ဆိုရင် ကလေး ငယ်က ပို၍
ကျန်းမာစွာ ကြီးပြင်း လာနေ သည်ကို သိရှိ နိုင်ပါသည်။
၁) နေ့တိုင်း ထမင်း စားပြီး နောက်နှင့် မအိပ်ခင် အစ ရှိသော အမေ အနားယူ နေသည့် အချိန်၌ လုပ်ရန်
၂) ဘယ်ဘက်ကို စောင်း၍ အိပ်ပါ။
၃) ကလေး ၁၀ကြိမ် လှုပ်လျှင် ဘယ်နှ မိနစ် ကြာခဲ့ လည်းဆို တာကို တိုင်းတာမည်။
★ ပုံမှန်နှင့် အခြေ အနေ မတူခြင်း၊ ယနေ့ အချိန်ထိ ပုံမှန် အတိုင်း စစ်ဆေး နိုင်ခဲ့ ပေမဲ့ ကလေး၏ လှုပ်ရှား မှုကို လုံးဝ မခံစား ရတော့
သည့်အခါ စိတ်ချ ရအောင် ဆေးရုံ သွား၍ ဆွေးနွေး ကြည့်ရင် ကောင်းပါ သည်။
ကလေး မလှုပ် လျှင်လည်း စိတ်မ ပူပါနှင့်။
ကလေး လှုပ်ခြင်းကို စတင် ခံစား ရလာလျှင် ကလေးက လှုပ်ရှားမှု
မရှိ တဲ့အ ချိန်၌ စိတ်ပူ လာတတ် ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ကလေး ငယ်
သည် ဗိုက်ထဲ၌ အိပ်သည့် အချိန်နှင့် လှုပ်နေသည့် အချိန် ဆိုပြီး
ရှိသည်။ အကြမ်း ဖျင်းအားဖြင့် မိနစ်၆၀ ပတ်လည်ဖြင့် အိပ်လိုက် နိုးလိုက် ဖြစ်သည်။ ၁နာရီ ကြာပေ မဲ့လည်း လုံးဝ ကလေး၏ လှုပ်ရှား မှုကို မခံ စားရ သည့်အ ခါ၌ ဆေးရုံ သွားပြ ကြည့်ပါ။
ကလေး လှုပ်ရှား ခြင်းကို ခံစား ရခြင်းသည် ကလေးက ကျန်းမာ
စွာဖြင့် ကြီးပြင်း လာခြင်း သက်သေ။ ဒီလို လှုပ်ရှား မှုကို ခံစားရ သည့်အခါ အာရုံကြော များလည်း တော်တော် လေးဖွံ့ဖြိုး လာပြီး
အကြား အာရုံလည်း ပြည့်စုံ လာပါပြီ။
ဝမ်းဗိုက် ကိုထိ ကြည့်ခြင်း၊ စကား လှမ်းပြော ကြည့်ခြင်း၊ သီချင်း နားထောင် ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ကလေး ငယ်နှင့် ဆက်သွယ် မှုကို လုပ်ကြည့် ကြရအောင်！မိခင်၏ လှုပ်ရှား မှုသည် ကလေး ဆီသို့ ရောက်ရှိပြီး တုံ့ပြန် မှုကို ခံစား ရခြင်းသည် ဒီအပြင် မရှိသော ပျော်ရွှင်မှု ဖြစ်၏။ ""kicking game"" လို့ခေါ်သော ကလေး ငယ်၏ လှုပ်ရှား မှုမှ တဆင့် ကလေးနှင့် ဆက်သွယ်မှု ယူရန် တိုက်တွန်း ပါသည်။ ကြိမ်းသေ တကြိမ်လောက် လုပ်ကြည့်ရင် ဘယ်လိုလဲ？
kicking game သည် အစ ပိုင်း၌ လွယ်သည့် နေရာက စ၍ လုပ်နိုင် သွားလျှင် နောက်တ ဆင့်သို့ သွားမည်။ ချက်ချင်း တုံ့ပြန် သော ကလေး ရှိသလို မတုံ့ ပြန်သည့် ကလေးလည်း ရှိပါ သည်။ တုံ့ပြန်မှု မပေး လျှင်လည်း မလော ပါနှင့်！ ကလေး ကတော့ ဒါကို သိရှိ ပါသည်။ စိတ်အ ပန်းဖြေပြီး ပျော်စရာ ကောင်းသော နေရာနှင့် အချိန်ကို ရွေးချယ်ပြီး တနေ့ကို ၂~၃ကြိမ်၊ ၁လကျော် လောက်ကို စိတ်ရှည် စွာဖြင့် လုပ်ပါ။
၁) ကလေးက ကန်လျှင် ထိုနေ ရာကို kick လို့ ပြောရင်း ရိုက်ပါ။
၁~၂ မိနစ် ကြာလျှင် ပြန်ကန် လာသောကြောင့် တဖန် ထိုနေရာ
ကို kick လို့ ပြောရင်း ရိုက်လိုက်ပါ။ အဲ့လို လုပ်လိုက်လျှင် ပြန်ကန်
၂) နံပါတ် ၁ကို နေ့စဉ် ရက်ဆက် အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ပြီးလျှင် ဒီတခါ ကလေး ကန်နေကျ နေရာနှင့် မတူသည့် နေရာကို kick လို့ပြောရင်း ရိုက်... ထိုအခါ ကလေး ငယ်က မိခင် ရိုက်လိုက် သည့် နေရာကို ပြန်ကန် လာမည်။ ဒါကို ၁~၂ ပတ်ကြာ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်လျှင် အမေ ရိုက်လိုက်သည့် နေရာနှင့် အကြမ်းဖျဉ်း အားဖြင့် တူညီသည့် နေရာအား ပြန်ကန် လာမည်။
၃) ဒီလိုမျိုး အသားကျ လာလျှင် kick,kick လို့ပြော ရင်းနှင့် ဗိုက်ကို ဖောင်းဖောင်း ဆိုပြီး ၂ကြိမ် ရိုက်လိုက် မည်။ ထိုအခါ ကလေးက ၂ကြိမ် ပြန်ကန်၍ အဖြေ ပေးလိမ့်မည်။ အမေက ရိုက်လိုက် သည့် အကြိမ်နှင့် တူညီသည့် အကြိမ် အတိုင်း ပြန်ကန် လာမည်။